Kheyre oo sheegay Sababta ka dambeysa in Farmaajo uu u guuro Wasaarada Gaashaandhiga – XAMAR POST
Kheyre oo sheegay Sababta ka dambeysa in Farmaajo uu u guuro Wasaarada Gaashaandhiga
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay xilligaan wado qorsho dib loogu dhisayo Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, taasna ay sabab u tahay in Madaxweynaha uu u guuro Xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga.
Waxa uu sheegay in qorshahaas uu haatan yahay mid socda,isla markaana dardar gelinta dhisamaha ciidanka uu Madaxweyne Farmaajo u tegay Wasaaradda Gaashandhigga Soomaaliya.
“Waxaa la isku raacay in la daradar geliyo dhismaha ciidanka,waxaa la isku raacay in dhismaha ciidanka uu yahay muhiimada koowaad ee dowladda,waxad ogtihiin in sanad ka hor idiin sheegay in dalkeena uu u baahan yahay in ciidan loo dhiso sidaad ogtihiinba haatan dhismaha waa uu bilaawday,waana wax ka go’an dowladda,sanad ka hor waxaan cadeynay in ciidanka Soomaaliya ay guud ahaan ammaanka Soomaaliya la wareegi doonaan,waxayna mareysaa meel fiican ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaare kheyre ayaa sheegay in uu Bisha soo socoto ka qeyb geli doono Shir Heer Caalami ah kaas oo looga hadli doono dhismaha Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xiligaan waxa uu howshiisa Shaqo ka wadaa Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya,isaga oo wada qorsho dib-udhis loogu sameynayo Ciidamada Qaranka Soomaaliya.